Mason Greenwood oo heshiis cusub la galay man united. Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Mason Greenwood oo heshiis cusub la galay man united.
Mason Greenwood oo heshiis cusub la galay man united.
Da’yarka reer england Mason Greenwood ayaa qalinka ku duugay heshiis cusub kaas oo ku sii hayn doona Old Trafford dhowrka xilli ciyaareed ee soo socda Mason Greenwood ayaa qalinka ku duugay heshiis cusub oo uu ku sii joogayo Manchester United illaa iyo bisha Juun 2025, iyada oo ikhtiyaarka loo sii wado sannad kale.
19 jirka ayaa ka mid noqday xidigaha Safka hore ee Lagu xisaabtamo kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa u saftay kulankiisii ugu horeysay ee 2019 waxaana uu u saftay 82 kulan kooxda tan iyo markaas.
Waxaa si weyn loogu ixtiraamaa inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee weeraraya kartida da ‘yarta ah ee Premier League, waxaana lagu abaalmariyay horumarkiisa iyo shaqadiisa adag ee heshiis cusub oo uu kula sii joogayo kooxda afarta sano ee soo socota kooxda manchester united.
Previous articleWaxkabaro xidigo faransiis ah oo premier league ka dhaliyeen goolasha ugu badan.
Next articleDavid Alaba oo maanta ku dhawaaqay Kooxda uu ku biirayo